ESI GOSIPUTA OGHERE ZORO EZO NA EXCEL - EXCEL - 2019
Na-akwado mmepụta nke oghere zoro ezo na Microsoft Excel
N'ezie ọtụtụ n'ime gị na-echeta Opera ochie ahụ dị mma. Ọ bụ ezigbo nchọgharị nke nwere ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị. Ọzọkwa, ihe ndị a adịghị mfe, kama ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa nke na-eme mfe ma melite nchọgharị. O di nwute, Opera abughizi ihe achicha, ya mere ndi ozo na ndi na agba ngwa ngwa juola ya. Otú ọ dị, n'afọ 2015, a mụrụ nwa ya kpọmkwem, ya mere, a mụrụ ya. Vivaldi mepụtara otu ìgwè nke gara aga na Opera.
Nke a na-akọwa eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị anyị hụwororịrị na ndị bu ya ụzọ. Otú ọ dị, mmadụ ekwesịghị iche na Vivaldi bụ Opera oge a. Ee e, ihe odide ahụ nakweere nkà ihe ọmụma ochie - iji dozie ihe nchọgharị weebụ na onye ọrụ, ma ọ bụghị nke ọzọ. Ka anyi lee ihe ihe ochie bu.
Dị ka ị maara, ha na-ezute ha site na uwe, na mmemme abụghị iche. Na ebe a, Vivaldi kwesịrị ito - nke a bụ otu n'ime ihe nchọgharị kachasị. N'ezie, e nwere FireFox, nke ị nwere ike ịhazi ọtụtụ ihe niile, ma onye mbido nwere di na nwunye.
Onye kachasị amara ha bụ nhọrọ nhọrọ nke agba nke interface ahụ. Ọrụ a na-agbanwe agba nke ebe ntanetị ma ọ bụ ihe ntanetị maka agba nke akara ngosi. Otú o si arụ ọrụ, ị nwere ike ịhụ na nseta ihuenyo n'elu na ihe atụ nke Vkontakte.
Ihe niile edoziri edozi bụ ịgbakwunye ma ọ bụ wepu ụfọdụ ihe. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike wepu bọtịnụ "Weghachite" na "Transition", nke anyị ga-atụle na nkọwa ndị dị n'okpuru ebe a. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhazi mkpịsị taabụ, ogwe ntụsara, ọnụọgụ na ogwe ọnọdụ. A ga-atụle nke ọ bụla n'ime ihe ndị a dị n'okpuru ebe a.
Ogwe Tab dị otutu Opera. Ka anyị malite n'eziokwu na enwere ike idowe n'elu, n'okpuru, n'aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Enwere ike ịgbatị ya na ederede a chọrọ, nke bara ezigbo uru na nnukwu monitors, n'ihi na n'otu oge ị nwere ike ịhụ peeji nke ibe. Otú ọ dị, kpọmkwem otu ihe ahụ nwere ike ime naanị site na ịmegharị onye ọbụla na tab. Nke a bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ taabụ na aha ndị yiri ya, ma dị iche iche ọdịnaya.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-echekwa Recycle Bin, ebe a na-echekwa taabụ ikpeazụ ejiri emechi, ga-aba nnọọ uru. N'ezie, ọrụ yiri nke a bụ na ihe nchọgharị ndị ọzọ, ma lee, ọ na-esiri gị mfe ịnweta.
N'ikpeazụ, ọ dị mma ịkọ banyere otu taabụ. Nke a bụ, n'ejighị ikwubiga okwu ókè, ọrụ amamihe, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ụyọkọ nke taabụ emeghe. Ihe kachasị mkpa bụ na ị nwere ike ịdọrọ taabụ na ibe gị, mgbe nke ahụ gasịrị, e mere otu ìgwè nke na-ewepụta ohere dị obere na panel ahụ.
Enwekwara ụfọdụ atụmatụ mara mma nke jikọtara ya na taabụ tab. Dịka ọmụmaatụ, imechi taabụ na pịa abụọ. Ịnwekwara ike ịgbanye taabụ, mechie ihe niile ma e wezụga onye nọ n'ọrụ, mechie ihe niile gaa n'aka nri ma ọ bụ aka ekpe nke onye ọrụ ahụ, n'ikpeazụ, wepụ taabụ na-adịghị arụ ọrụ na ebe nchekwa ahụ. Ọrụ ikpeazụ bụ mgbe ụfọdụ bara uru.
Nke a dị ugbu a na ọtụtụ nchọgharị, mana maka oge mbụ ọ pụtara kpọmkwem na Opera. Nte ededi, Vivaldi enye ama ọsọn̄ọ ada ukpụhọde. Malite ọzọ, ọzọ, n'eziokwu na na ntọala ị nwere ike ịtọ ntọala na ọnụ ọgụgụ kachasị nke ogidi.
E nwere ọtụtụ saịtị ndị arụnyere, ma ịgbakwunye ndị ọhụrụ dị mfe. N'ebe a, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ nchekwa, nke dị mfe ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke saịtị ejiri. N'ikpeazụ, site na ebe a ị nwere ike ịnweta ngwa ngwa na ibebata.
Ka anyị gaa site n'aka ekpe ruo n'aka nri. Ya mere, na bọtịnụ "Back" na "Gaa n'ihu" ihe niile doro anya. Ma n'azụ ha bụ "Bịa" na "Transition." Nke mbụ na-ewega gị na peeji nke ị malitere ịmata saịtị ahụ. Ọ bara uru ma ọ bụrụ na ị na-awagharị na mberede, ma enweghi bọtịnụ maka ịlaghachi na ibe ụlọ na saịtị ahụ.
Mpịakọta nke abụọ bara uru na engines ọchụchọ na forums. Site na "amụma" dị mfe, ihe nchọgharị ahụ na-amata peeji nke ị ga-eleta ọzọ. Isi ihe dị mfe - na mbido peeji nke mbụ ịchọrọ ịga leta nke abụọ, ebe Vivaldi ga-emegharị gị. Mkpọchi ikpeazụ n'ime ebe nkesa ahụ bụ "Update" na "Home".
Ogwe adreesị ahụ onwe ya, na nlele mbụ, na-eburu ozi mbụ: data njikọ na ikikere maka saịtị ahụ, adreesị ozi-e, nke nwere ike gosipụta na abbreviated na full ụdị, yana ịgbakwunye bọtịnụ ibe.
Ma lee anya ebe a mgbe ị mepee ma ọ bụ mee ka ọ dị ọhụrụ ma hụ ... ee, ihe ngosi ihe nbudata. Na mgbakwunye na ọganihu, ị nwekwara ike ịhụ "arọ" nke ibe ahụ na ọnụ ọgụgụ nke ihe dị na ya. Otu ihe ga-adị ka ihe na-abaghị uru, ma mgbe ụbọchị ejiri ya, otu na-achọ ya na ihe nchọgharị ndị ọzọ.
Ihe nchọta nke "Search" abughi ndi ogba. Ee, nke a adịghị mkpa, ihe kachasị mkpa bụ ịrụ ọrụ nke ọma. Enwere ike ịmepụta engines ọchụchọ, ehichapụ ma gbakwunye na Ngalaba. Ihe kwesiri iburu n'uche bu ichogharia otu search engine site na iji hotkeys.
N'ikpeazụ, nkwupụta gị ga-egosiputa na ogwe ihe nkesa. E mepụtara nchọgharị ahụ na Chromium, nke mere ka o kwe omume ịgbakwunye ndapụta ozugbo ozugbo a tọhapụrụ ya. Na nke a, aghaghị m ịsị, ọ dị mma, n'ihi na ekele maka nke a, ndị ọrụ nwere nhọrọ dịgasị iche iche sitere na ụlọ ahịa Google Chrome. Otú ọ dị, ndị mmepe nke Vivaldi na-ekwu na n'oge na-adịghị anya, ọ ga-ezube ịmalite ụlọ ahịa ngwa ya.
Nke a nwere ike ịkpọ otu n'ime ihe ndị bụ isi, ebe ọ bụ na e nwere ngwaọrụ na ọrụ bara uru. Mana tupu anyị aga n'ihu na nkọwa ha, ọ dị mkpa ịchọrọ na, dị ka ndị mmepe ahụ, na nsụgharị n'ọdịnihu, a ga-enwe bọtịnụ ole na ole ma, ya mere, ọrụ.
Ya mere, nke mbụ n'ime ndepụta ahụ bụ "Ihe edeturu". Ná mmalite, e nweela ebe dị iche iche ebe dị irè, a ga-ahazi ya n'ime otu. Ị nwere ike iji ma nchekwa abụọ dị njikere, ma mepụta onwe gị. Ihe kwesiri iburu n'uche bu onyonyo nke uchu na nkata.
Ọzọ bia "Downloads", nke anyị na-agaghị ebi na ya. Tụkwasị na nke abụọ gara aga, e nwere "Ihe edeturu". Nke a bụ ihe dị iche iche maka ihe nchọgharị, ma dịka ọ gbanwere, ọ nwere ike ịba uru. Enwere ike tinye ha na nchekwa. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịgbakwunye adreesị peeji nke na mbido dị iche iche na ndetu.
Na-achọpụta obere "ntinye aka" na sidebar? N'azụ ya, ọ bụ otu ihe dị iche iche na-adọrọ mmasị - ngalaba ntanetị. Na nkenke - ọ na-enye gị ohere imeghe saịtị na sidebar. Ee, ee, ị nwere ike ịlele saịtị ahụ mgbe ị na-ele saịtị ahụ.
Otú ọ dị, ịhapụ ọchị, ị maara na ihe bara uru. Oghere weebụ na-enye ohere, dịka ọmụmaatụ, iji na-eburu n'uche ozi akwụkwọ na netwọk mmekọrịta, ma ọ bụ vidiyo na ntụziaka, mgbe ị na-eme ihe na ibe. O kwesiri ighota na, oburu na o kwere omume, ihe nchọgharị ahu ga emeghe uzo ozo nke saịtị.
N'ikpeazụ, lee anya na ala nke sidebar. Enwere bọtịnụ echekwara ngwa ngwa na ọnụọgụ na zoo / na-egosi sidebar. A pụkwara ime nke ikpeazụ site na iji bọtịnụ F4.
Nke a abụghị ihe dị mkpa, mana site n'ịgụ ihe ndị a, ị nwere ike ịgbanwe obi gị. Ka anyị malite ọzọ n'aka ekpe - "Ntinye nke ibe." Cheta otu ìgwè dị iche iche? Ya mere, site na iji bọtịnụ a, ị nwere ike imepe ha n'otu oge ahụ! Ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, tinye otu saịtị na ekpe, onye nke ọzọ n'aka nri, ma ọ bụ n'elu-ala, ma ọ bụ "okporo". Na ebe a, enwere ike ịbụ otu ihe - ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe ụda nke saịtị ahụ, ya bụ. 2 saịtị ga-ekewaa ohere ihuenyo n'etiti ha n'ụzọ doro anya na ọkara. Olileanya, na nsụgharị n'ọdịnihu, ndị mmepe ga-edozi nke a.
Igodo ọzọ ga-aba uru maka ndị nwere Intanet ngwa ngwa. Ọfọn, ma ọ bụ ndị na-achọ iwe ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ọsọ ma ọ bụ zọpụta okporo ụzọ dị oké ọnụ ahịa. Ọ bụ maka ịhapụ ihe nbudata ihe oyiyi. Ị nwere ike machibido ha kpamkpam, ma ọ bụ kwe ka naanị foto echere ka egosiputa.
Ọzọ anyị nwere ọrụ pụrụ iche - "Mmetụta peeji". N'ebe a, ị nwere ike ịgba ọsọ na CSS Debugger, na-achagharị agba (bara uru na abalị), mee ka ibe gị na-acha ọcha na-acha ọcha, gbanwee ya na 3D na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ezie, ọ bụghị mmetụta nile a ga-eji mee ihe mgbe nile, ma eziokwu nke ọnụnọ ha dị ezigbo ụtọ.
* Ọdịdị omenala
* Ọtụtụ ndị ọrụ ọrụ
* Nnukwu ọsọ
* Achọghị ya
Ya mere, a ghaghị ịkpọ Vivaldi ihe nchọgharị zuru oke. Ọ gụnyere nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ nke na-agba ọsọ ọrụ na iwebata akwụkwọ, yana obere ejiji nke na-emegharị ọ bụghị naanị na ọ dị mfe, kama ọ na-atọ ụtọ karị. Onwe m, ana m eche ugbu a banyere ịgakwuru ya. Kedu ihe ị na-ekwu?
Download Vivaldi maka n'efu
Bido nbudata kachasị ọhụrụ site na saịtị gọọmentị
9 ndaputa bara uru maka Vivaldi Ụzọ dị mfe iji mechie taabụ niile na Yandex Browser ozugbo 3 ụzọ imepụta ọhụrụ taabụ na Mozilla Firefox Satellite / Nchọgharị
Vivaldi bụ ihe nchọgharị weebụ dị iche iche na engine Chromium nke na-arụ ọrụ ngwa ngwa, na-enwekarị peeji nke buru ibu ma nwee akara ngosi aha dị mma.
Onye Mmepụta: Vivaldi Technologies